Izithombe ezincane zikaFidel Castro: kusuka kumlimi kuya ku-revolutionary
Ngobusuku obuphelile, uMongameli weNkatha Freedom of the Freedom, umholi weCuban Revolution, uFidel Castro, wafa eneminyaka engu-91. Wahola izwe iminyaka engu-50, waba ngowesithathu ehhovisi likahulumeni emhlabeni wonke isikhathi sikahulumeni emva kweNdlovukazi u-Elizabeth kanye neNkosi yaseThailand.
Izindaba zakamuva ngokushesha zaba yindaba enkulu yezindaba. Uhlobo luni lomuntu lo mlando, owaba uphawu lwe-Cuba ekhululekile?
UFidel Castro - kusuka kumlimi kuya ku-revolutionary
UFidel Alejandro Castro Ruz wazalelwa emndenini owenza kahle umlimi futhi kusukela ebuntwaneni wayehlukaniswa nenkumbulo yakhe enhle kakhulu namakhono akhethekile. Wayekuthanda kakhulu ukufunda, waqeda iziqu ezivela ekolishi elinomthwalo wabafundi bamaJesuit futhi wathola imfundo esemthethweni kakhulu eHaana University, lapho ayebheka khona imibono kaMarxist.
KuFidel amahlanu kanye nomfowabo uRaul no-Ernesto Che Guevara bahlela ukuphikisana nohulumeni wobushiqela waseBatista. Abantu abangu-82 kuphela abasekela abaguquleli abashisayo ngaleso sikhathi.
Ngemuva kokunqoba kwe-revolution ngo-1959, uFidel waba yinhloko yombuso wezwe futhi wahlala ehhovisi kuze kube ngu-2008.
Phakathi nokuphila kwakhe kuka-600 imizamo yenziwa ngokumelene noFidel Castro
Konke lokhu umbuso we-Castro awuzange uphumule ubuholi base-US, uFidel wahlela imizamo engaphezu kuka-600. Wathunyelwa izinyoka, wazama ukufaka ubuthi ngamapeni kanye nogwayi, waze wahamba njengesipho samagciwane aphethwe yi-bacillus ye-tubercle ye-scuba. Lapho uMelika ehlambalaza u-Castro ngokuphambene nenkululeko yokufuduka kwamaCubans angasebenzi, wakhululwa etilongweni wabe esexoshwa zonke izigebengu eziyingozi eMelika.
Ukuphila komuntu siqu kaFidel Castro
UFidel empilweni yakhe yonke wayenamakhosikazi amathathu asemthethweni kanye nenani elikhulu lamakhosikazi, angaphezu kwamakhulu amathathu. Ngalokhu waze wanikezwa nesidlaliso esithi "Ihhashi".
Ngaphandle kwezinguquko kanye nabesifazane, u-Castro wayenezinkanuko ezimbili zokuphila: ukuzingela kwamanzi nokupheka.
Umholi waseCuban wayehlale ehlasele abangane bakhe ngobuciko bakhe bokudla, ikakhulukazi bathanda ukupheka pasta. Mayelana noFidel bathi:
Uhlala kuphela lapho elele noma edla - yingakho ethanda ukudla okuningi, umfanekisela ukuphumula.
Intshe kaFidel Castro - izinsuku ezingu-10 ngonyaka ezindabeni ezibaluleke kakhulu
Wanikezwa ubuhlungu obuningi ngentshebe yakhe edumile, engazange ayihlabe ngisho nangemva kokunqoba kwe-revolution, nakuba ethembisa. U-Castro wakhuluma ngokuhle ngezinzuzo zebhevu:
Uma ulondoloza imizuzu engu-15 ngosuku ngaphandle kokuboya izintshevu zakho, uzothola izinsuku ezingu-10 ngonyaka, ongayinikela ekusebenzeni, ekufundeni, ezemidlalo, noma ngabe yini oyifunayo. Futhi ulondoloze ikhala, insipho namanzi ashisayo!
Ngokuqinisekile, uFidel Castro wayeyindoda evelele, esebenzile ukuba ngumlando ngesikhathi sokuphila kwakhe.
Qalisa izinhlamvu zokuqala zokuqala: izingane zabo eza esikoleni
I-Beverly Hills inkanyezi 90210 uShannen Doherty waqala i-chemotherapy
Isithombe Prigogine noValeria noKhodorkovsky bavusa inkohlakalo
UNatasha Koroleva no-Igor Nikolaev bahlangana ndawonye!
U-Xenia Borodina utshele nge-scandals nendodakazi endala
UMilan no-Alexander Kerzhakov benqaba ukuphawula ngamahemuhemu mayelana nokukhawulwa komdlali webhola
I-Reuters ibize u-Ekaterina Tikhonova indodakazi kaPutin
Kissel kusuka ku-cranberry ne-currant emnyama
Amakhambi omphakathi ngezinxeba ngemuva kokudubula
Izibhamu noshizi no-anyanisi
Yini ikhilimu engayenza?
I-fish pie ngokusheshisa
Amazambane abhakawa utamatisi kanye noshizi
Ngesikhathi Usuku Luka-Valentine: yini eyisiko ukunikeza uSuku Lwabathandayo, izindabakwane zomkhosi
Amasks ane pepper: ama-best zokupheka ekhaya zokuqinisa nokukhula kwezinwele
Ama-eggplant nge-bell pepper nama-mushroom
Imithi ephansi kakhulu emashalofini ama-pharmacy
Ubungane besifazane nesimo sezimali
Iziphi izipho onganikeza
Ukufuna iJjube yezingane kuyingozi
Izakhiwo zokwelapha ze-ginseng
I-saumoni yemikhosi nge-lime